Amahlaya amaTager amaHoksi: Okulungileyo, Okubi nakwi-Ugly
UGuffaws kunye neGroaners ephefumlelwe yiTiger
Ininzi iTiger Woods ihlaya le mihla yilezi zine-liners ezavela emva kwengozi yeMoto ye-Woods kunye nokukhohlisa i-scandal ekuqaleni ko-2009. Kodwa akubona bonke!
Enyanisweni, iziqendu eziliqela kwiGokethi yamaJokes ethu zibandakanya iTiger.
Ukongeza kwezi ntlanzi ezimbini ngasentla, simele sihlanganyele nawe esinye sezihlandlo zethu eziziqhenkcezayo zokugubungela igalofu, inqaku elithi " Ngubani oye waqala? Ngaba yayinguTiger Woods?
"I-journalism yezemidlalo ayifumananga kangcono kunokuba, abantu!
Kodwa, masijongane nayo, xa sicinga ngeentlanzi zeTiger Woods namhlanje ezininzi iingcamango zethu ziphendulela kwiintlanzi malunga nezihlazo.
Umbuzo: Yintoni eyimbi kunokuba iTiger Woods idlulise iKadillac Escalade yakho?
A: UDick Cheney ugibele ibhendi.
Umbuzo: Unjani "u-Tiger-proof" kwiklasi yegalufu?
A: Ngokubeka ngokucacileyo i-hydrant fire around it.
Amahlaya amaTekisi asemini
Ubomi bemiboniso yasebusuku bobusuku bebenomhla weentsimi kunye neengxaki zeT Woods ngasekupheleni kuka-2009 ukuya ngo-2010, emva kokuphazamisa i-SUV yakhe emlilweni womlilo ngaphandle kwendlu yakhe; emva kweembonakaliso malunga nezinto ezininzi zeTrosti ezichasene nezidlobongela zavela; emva kokuhlukana kwakhe aze ahlukane no- Elin Nordegren .
UDaniel Kurtzman waqulunqa ezinye zezona zinto zihamba phambili ngobusuku obusebusuku malunga neTiger ukususela kuloo xesha. Nazi ezinye zam intandokazi, zonke ezichazwe nguConan O'Brien :
"Imithombo ecaleni kweTiger Woods ithi iyichitha imihla yakhe ngoku idla ukutya kunye nokubukela iikhathuni. Ngamanye amazwi, uTiger Woods uye waphila ubomi bomntu obomnandi, ukuba aphile ubomi bobomi bonke."
"Omnye umfazi uye wadibana neTiger Woods kwaye lo uneminyaka engama-48 ubudala. Okanye nje ngokuba uTiger ubhekisele kuye, 'uhambo lwam oluphezulu.'"
Uphando olutsha uthi ama-86 ekhulwini abantwana abahlala bebukela i-TV banokuqonda i-Tiger Woods. Eyona nto inengqiqo, kuba unokuba nguyise. "
Kwaye nantsi enye evela kuStephen Colbert: "Isigubha sihlala sinika ipesenti ezili-110.
Yingakho wanikela umfazi wakhe ngamaphesenti angama-100 kwaye wayesenokuba neepesenti ezili-10 ezishiye ngenxa yenkosikazi yakhe. "
Eyokuqala (kwaye kaninzi) I-One-Liners
Iintlanzi malunga neengxaki zasekhaya zaseThomas zaqalisa ukujikeleza ngokukhawuleza xa iindaba eziphathelene nokushayiswa kwemoto yakhe kunye nezigxeko malunga nemicimbi yokungabikho komtshato.
Ezinye zeentlanzi eziqhelekileyo ezivakalayo kwezi zihloko ziquka ezi:
Amapolisa acela umfazi kaTiger ukuba wambetha kangaphi. U-Elin wathi, "Andikhumbuli nje, undibeke phantsi u-5."
I-Ping inesitya esitsha seentsimbi ezibizwa ngokuba yi-Elins. Ziyinkampani onokuyixabela ngayo iTiger.
Yintoni i-Tiger Woods efana nayo kunye nosana uphawu? Bobabini babedlala ngeNorway. (Kakade, u-Elin ngokwenene isiSweden. Kodwa ilayisenisi yesondlo ivumelekile kumahlaya.)
Ngaba uvile uTiger utshintshe igama lakhe kuCheta?
Abanye abafazi beTiger abaphathi kakuhle. Ziyimbuyekezo.
Ngaba uvile i-motto entsha ye-Nike? Yenzani nje.
Uthini umahluko phakathi kweTiger Woods kunye neSanta Clause? USanta wayeka kwii-three ho.
I-Tiger yatshitshiswa kwi-hydrant yomlilo kunye nomthi. Akakwazanga ukugqiba phakathi kwokhuni nentsimbi.
Uthini umahluko phakathi kwemoto nebhola yegolfu? I-Tiger ingaqhuba ibhola yegalufu 400 iiyadi.
I-Tiger Woods icebile kangangokuthi iineemoto ezininzi ezininzi. Ngoku unomngxuma kwenye.
I-Tiger inefilimu entsha ephuma. Kubizwa ngokuba yiCrouching Tiger, Hydrant efihliweyo .
Amahlaya amaTiger Woods
Uninzi lwangentla luvela kwi-quipsters yamatshana - abantu abafana nawe nam. Emuva xa saqala ukuqokelela ezinye zeehlaya - ngo-2009 no-2010 - samema abafundi ukuba bangeze amahlaya abo kuluhlu. (Uxolo, awukwazi ukwenza oko.)
Kwaye, njengoko umxholo ucebisa, ezinye zihle kakhulu kwaye ezinye azihle kakhulu! (Kwaye abanye bayabubula ngokwenene.) Kwaye abaninzi babo - baxakeke, baninzi babo - basweleke kakhulu. Kodwa makhe sibone ukuba ngabafundi bezaphi (igama elingummiselo ligama elishiywa ngumvakalisi ngamnye xa bathumela ihlaya labo):
Matt : Tiger uye waqamba isiseko sakhe 'Kuqala T kunye'
jill : umbuzo: yintoni na umehluko phakathi komxholo wezandla kunye nokunyuka? Impendulo: i-tiger inokuqhuba umqhubi weetayiti ezingama-400
I-slobwedge : I-Tiger yanikela enye yeyakhe iphosa. Ngoku ke uyena-golfer.
Ihlazo elimnandi : I-Tiger Woods ikhangele kwi-sex rehab namhlanje. Enyanisweni wayejonge kwiintathu kodwa abazi malunga nomnye.
I-Pokrface : Yintoni uTiger Woods athi kumfazi emva kokulala ngesondo? "Ndiza kuba semakhaya ngemizuzu engama-30."
UBrad Taylor : I-Tiger sele iqalile abantu abaninzi ngoku angayisebenzisa ukusetyenziswa komthetho kwi-42.
UAlex Julius : Kukho izilwanyana ezintsha ngaphandle kokuphucula ubomi bakho ngokwesini kuphela; Kwakhona kuphucula umdlalo wakho wegalufa. Kubizwa ngokuba yi-TIAGRA.
Mick : I-Tiger yayiqhuba uCaddy phakathi kwamantombazana xa yaqhekeka yaya ngaphandle kwegaraji elincinci. Wangena waza wabuza umatshini omdala ukuba unokujonga. Njengoko bobabini bancike kwi-motor, i-golf tee yawa ephaketheni likaTiger kwisikhumba semoto. Umatshini omdala wabona i-tee waza wabuza ukuba yintoni. I-Tiger yathi "Kukuphucula iibhola zakho ngelixa uqhuba." Kwakuphi umatshini waphendula wathi, "Mfana, Cadillac ucinge ngezinto zonke!"
brando : Zingaphi iimpazamo zikaTiger ezithathayo ukuqhuba i-bulb? NGOKUBA!
I-Zach : I-Tiger Woods yaphuma nencwadi entsha ebizwa ngokuthi "Indlela yokufikelela kwiiHolesi ezingama-18 ngaphandle kokuba umfazi wakho azi"
ptz : Lo ngumngcipheko ovela kuGeorge Lopez: "Makhe ndibeke ngokuya kuba abagadi begalufu baya kuqonda. Wadlala ibhokhwe engafanelekanga, wayenomqhubi oqhutyayo kwaye ngoku kufuneka aphume emanga. "
LJ : Yiyiphi inkambo yeTiger Woods eyintandokazi? Iintlobano zesini !!
ptr : Wachitha nje i-$ 20 kwiDVD yakamuva yeTiger Woods "Iimbobo zam 18." Uphendulela yonke into yegalufu.
Vijay Singh: Iprofayili ye-3-Time Major Champion
I-Seva - Inkonzo Engenakuzinzondo
Incwadi yam E
Ziziphi iincwadi ezibalaseleyo zeencwadi zabafundi?
Ziziphi iiMerika ezineeMviwo eziBaluleke kakhulu kwiBar?
Ngoobani Oonyana Bokukhulula?
Funda malunga neelwimi zesiTaliyane
Alkyne Chains elula